Filtrer les éléments par date : mardi, 19 mai 2020
mardi, 19 mai 2020 22:11
Moramanga: Hisitraka « Vatsy Tsinjo » ireo tena marefo ho fiatrehana ny fiantraikan’ny valanaretina Covid-19
Distrika ahitana tranga Covid-19 maro i Moramanga, Faritra Alaotra Mangoro. Minisitra maromaro no nanao rodobe taty an-toerana androany, notarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian, nanome toromarika ny solontenam-panjakana sy nanentana ny fiaraha-miasan’ny rehetra, indrindra eo amin’ny fanentanana ny olona hanatanteraka ireo fepetra mihatra amin’ny hamehana ara-pahasalamana, tahaka ny fampihenana ny fifamezivezena mba hisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina, raha tsy misy antony manokana voamarina mazava.
Hentitra ny Praiminisitra nilaza fa ny refy ahafahana mamaritra ny fahombiazan’ny paikady napetraka dia ny fifehezana ny tahan’ny “cas positif” sy ny olona misy ny soritr’aretina.
mardi, 19 mai 2020 21:59
Antamponateza RN3: Ambony ambany no niafaran’ilay kamiao niala moto
Niala moto iray izay nisongona moto hafa nanao anjolofo tao anaty fiolahana tsy mifankatazana, nefa misy lavaka no nosafidin’ny mpamilin’ilay kamiao hifanena aminy mba tsy hisian’ny ra mandriaka sy aina nafoy ; tafavoaka ny arabe anefa ilay kamiao ary nivadibadika ka ny kodiarana no lasa ambony.
Teo Antamponateza amin’ny lalam-pirenena faha-3 anelanelan’i Talata Volonondry sy Ankazondandy no nitranga ny loza androany. Tsy nisy ny aina nafoy.
mardi, 19 mai 2020 21:48
Covid19: Malagasy maro no tavela any ivelany miantso vonjy ny hamelana azy ireo hody an-tanindrazana
Mitaraina ireo vehivavy teratany Malagasy mikarama any Koweït fa ho tapitra amin’ny 22 may izao ny fe-potoana nomen’ny governemanta any an-toerana handraisana an-tanana azy ireo hahafahan’izy ireo mody an-tanindrazana. Natoby amina sekoly izy ireo nanomboka tamin’ny 26 aprily, anatin’izao fihibohana noho ny Coronavirus izao, miaraka amin’ireo mpiavy avy amin’ny firenena hafa toa an’i Philippines, Népal, Indonésie, Ethiopie, Srilanka sns, ireto farany izay efa saika tafody any amin’ny fireneny avy ny ankamaroany.
Iantohana ny tapakilan’ny fiaramanidina hodian’izy ireo, fa miankina amin’ny fankatoavan’ny fanjakana malagasy ny hahafahan’izy ireo miditra eto Madagasikara ny fiaingana any.
mardi, 19 mai 2020 21:36
Ambanja: Lavanila 8 kg tratra teo amin’ny faritry ny « résidence » ny Distrika
Lavanila halatra avy hatrany no iheveran’ny maro ity 8 kg tratra teo amin’ny faritry ny « résidence » ny Distrika Ambanja ity. Mbola amin’ny 25 may 2020 rahateo no misokatra ny tsenan’ny lavanila aty amin’ny faritra Sambirano.
Misy anefa ireo mivarotra lavanila an-tsokosoko tsy mahandry ny fisokafan'ny tsena. 30 000 Ariary ka hatramin’ny 100 000 Ariary ny kilao amin’izao ny vanila maitso manta, izay isany mampirongatra ny tsy fandriampahalemana manoloana ny halatra lavanila maitso aty Ambanja.
Mandray an-tanana ny fanadihadiana momba ity raharaha ity ny eo anivon’ny Zandarimaria.
mardi, 19 mai 2020 20:58
Andilamena: Voasambotra ireo andian-jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana
Andian-jiolahy ao anatin'ilay fikambanana « Vatolampy » malaza ho mpilalao ody bala eto Andilamena izy ireo. Isan’ireo nanafika tao Mahatsara Kaominina Antanimenabaka ny alin’ny 10 may 2020, izay naharatrana raim-pianakaviana iray nofirain’izy ireo zava-maranitra ny lohany, ary nahaverezana entana sarobidy sy firavaka volamena ary vola 200 000 Ariary.
Voasambotra omaly ny sivy tamin’izy ireo ary anatin’ny famotorana azy ireo ny Zandarimariam-pirenena ankehitriny.
mardi, 19 mai 2020 20:51
Tsararano-Mahajanga: Nanaovany filan-dratsy ilay zaza dia iny izy no nitsoaka tany Marovoay
Tovolahy 20 taona no nahavanon-doza. Zazavavy 9 taona no nanamparany herisetra ara-nofo tany amin’ny fitombenany sady norahonany ho faty, tao Tsararano Ambony ny 7 may 2020. Nisy nahatsikaritra izy ka nitsoaka.
Nitantara ny nanjo azy ilay zazavavikely niharan’ny fanolanana. Nandray an-tanana ny raharaha ny Polisy rehefa nandray ny fitarainana. Voasambotra ny sabotsy 16 may 2020 tao Marovoay ilay tovolahy. Natolotra ny Fampanoavana androany ary notazomina am-ponja vonjimaika.
mardi, 19 mai 2020 20:23
BEPC sy Bakalorea: Tsy mbola voafaritra ny daty hanaovana ny adina ara-panatanjahantena
Miankina amin’izay ho toe-javamisy manoloana ny aretina Covid-19 ny vanim-potoana hanatanterahana ny adina ara-panatanjahantena (EPS) ho an’ny fanadinana BEPC sy Bakalorea. Tsy mbola voafaritra ny daty hanaovana azy.
Nisy androany Talata 19 mey fiarana-nikaroka vahaolana niarahan’ireo mpampianatra EPS matihanina amin’ny ambaratonga faharoa, niaraka tamin’ireo « proviseurs» sy talen’ny CEG avy eto Antananarivo sy ny manodidina, ary teknisiana ambony avy amin’ny oniversite, notanterahina tetsy amin’ny efitrano malalaky ny Minisiteran’ny Fanabeazam-Pirenena sy ny Fampianarana ara-Teknika sy arak’Asa Anosy.
Ady amin’ny Covid-19: Miara-miasa akaiky i Madagasikara sy ny OMS
Nandray anjara tamin’ny fivoriambe manerantany momba ny fahasalamana, izay nanomboka omaly ary nitohy androany i Madagasikara. Nandritra ny fandraisam-pitenenany, no nanamafisan’i Pr Ahmad Ahmad, minisitry ny fahasalamambahoaka malagasy fa miara-miasa akaiky i Madagasikara sy ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na OMS manoloana ny ady amin’ny valanaretina Covid-19 sy ny fahasalamana ho an’ny daholobe.
Etsy ankilan'izay dia nanohana ny antson’ny Sekretera jeneralin’ny Firenena Mikambana ihany koa i Madagasikara ka miray feo amin’ireo firenena 137 izay mitady vahaolana amin'ny ady amin’ny Covid-19 ho an’ny rehetra tsy ankanavaka. Manainga mavesatra ny rehetra mba tsy hanavakavaka ny olona manana fahasembanana.
mardi, 19 mai 2020 10:59
Diplomasia: Jeu d'échecs
Ny diplomasia dia toa ny Jeu d'échecs, samy mifankahita vato, samy mamisavisa ny mety ataon'ny andaniny sy ankilany, samy mametraka vatofantsika hamandrihana ny iray na hiarovan-tena raha misy fihetsika ataon'ny ankilany.
Io ilay hoe fihavanana fa ny kobay ankelika ihany, na basy atifi-kavana ka arangaranga, samy miaro ny tombotsoany, ka izay taitaitra eo no Echec et mat, izany hoe tafahitsoka ka tsy afaka miroso, tsy afaka mihemotra fa dia mirava ho azy ny tsena fa dia maty ny Roi vao mihetsika.
Mahalaza azy ny teny malagasy: Ambassade = Masoivoho = Maso ivoho = Maso aoriana = Maso mahita ny miafina, na sampana fitsikilovana.
Ny Ambassade iray izany, ankoatran'ny fikarakaran'ilay firenena manana masoivoho ao amin'ny toerana iray, ireo mpiray tanindrazana aminy, dia sampam-pitsikilovana eken'ilay firenena hipetrahany hiasa eo amin'ny taniny ihany koa. Hitatsika eny amin'ireny masoivoho samihafa ireny ireo sahafa be mampifandray mivantana amin'ny satelita amin'ny firenena niaviany ireny.
mardi, 19 mai 2020 08:43
Mahazoarivo – Vohipeno: Faty efa tena simba hita tao anaty lobolobo
Ny misandratr’andro ny zoma 15 may 2020 no nahazo fampandrenesana avy amina olontsotra ny zandary avy ao amin’ny Brigady Vohipeno fa misy faty efa simba ao Mahazoarivo Kaominina Vohipeno, Faritra Vatovavy Fitovinany.
Nidina tao an-toerana ny Zandary niaraka tamin’ny dokotera avy ao amin’ny CSBII Mahazoarivo nanao fitsirihana sy nanamarina ny zava-nisy.
Lehilahy fantatra amin’ny anarana Rosy monina ao Ambalangavo Kaominina sy Ditrika Vohipeno ity maty ity. Efa tena simba ny razana, ary tsy hita ny singa sy taova sasany tamin’ny vatany tamin’ny fotoana nahitana ny razana.
Nanokatra fanadihadiana ny Zandary ao an-toerana, hahafantarana ny ambadik’izao raharaha izao.